डीएनए प्रकरणमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको जवाफ: बाबु को हो भन्ने आमाले नै जान्दछ « Pahilo News
डीएनए प्रकरणमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको जवाफ: बाबु को हो भन्ने आमाले नै जान्दछ
प्रकाशित मिति : 10 July, 2016 3:11 pm
डीएनबारे हाम्रा प्रशस्त निर्णय भएका छन् । एउटा राजेन्द्रप्रकाश कोइराला र प्रकाशचन्द्र वस्ती माननीय न्यायाधीशहरुले गर्नुभएको छ । प्रमाणहरुका बारेमा एउटा प्रमाण डीएनए परीक्षण पनि हुनसक्छ । तर, अन्य यथेष्ट प्रमाणहरुका आधारमा पितृत्वको यकिन गर्न सकिन्छ भन्ने आधारमा अदालतलाई बाध्यता भयो । अर्को प्रेम शर्मा र भरतराज उप्रेतीका सन्दर्भमा भएको छ । टेकबहादुर थापाविरुद्ध इन्दिरा अधिकारीको नातासम्बन्धी माुद्दामा डीएन परीक्षण गर्ने भनिएको छ । तर, अन्य प्रमाणबाट पुष्टि भएमा डीएनलाई मान्न जरुरी छैन भनिएको छ । मेरो फैसलाले डीएन मान्य हुन्न भनेको छ र ? डीएनएको बारेमा फैसला बोलेको छ । डीएनए कन्फर्म प्रमाण हुन्छ, नहुने होइन । तर, प्रमाणहरु परीक्षणमा कन्टामिसन हुनुपर्छ । तर, मिस एप्रियसन भएको हुनसक्छ । यसमा अरु प्रमाणहरु नै प्रशस्त थिए ।
अर्को एउटा प्रमाण भन्छु, एउटा ड्राइभरको छोरो भनेर प्रमाण दिइएको छ । त्यो को, कहाँको हो ? प्रमाण दिनु पर्दैन ? के त्यो बच्चा बाबु बेगरको हुन्छ ? सैद्दान्तिक कुरा के हो भने लोग्ने या बाबु को हो भन्ने आमाले जान्दछ । एउटा मुद्दामा त्यो फैसला पनि भइसकेको छ ।
डीएनएको कुरा त २०६५ सालमा मात्रै स्थापित भएको हो । निर्देशन दिइएको छ, अवदेखि डीएनए गर्दा यो–यो विधि पु-याउनु भनेको छ । विद्वावनहरुलाई म ढाँट्दिन । फैसला लेख्ने बलराम केसी हुनुहुन्छ । तर, यो मैले गरेको (डीएनएको फैसला) को कुरा त २०६८ सालमा उठेको हो । तर, बाराम्बार किन उठाइन्छ ? दुई–तीन पटक यो मुद्दा जगाएर मलाई हुने पनि केही छैन ।
हाम्रो बेन्चमा मुद्दा आयो । रिटमा पनि मुद्दा कोल्याप्स भयो । अदालतको फैसलामा दुईवटा बाबु र छोरा हुबहु मिल्ने अनुहारलाई बच्चै होइन भन्दिऊँ ? त्यो महिलाले भोलिपल्ट उजुरी पनि गरिन् । मेरो जेठाजु र मेरो लोग्ने समान अनुहारका मान्छे अस्पतालभित्र पसेर रगत दिने काम भो । यो अबस्थामा दुवै बाबु र छोरा उभिदाँ एउटा लाठे छ र अर्को समान मिल्ने पुतली छ । उजुर गरेकी त्यो गरिब महिलालाई कसरी अन्याय गर्न सकिन्छ ? त्यो त लाहुरे हो, भागेर मलेसिया गयो भनिन्छ । अनि उजुरी चाँहि गर्दैन, आमाबाट जवाफ दिलाउँछ । यस्ता विभिन्न कुरा छन् । यस्तो अबस्थामा अदालतले तेरो लोग्ने होइन, बाबु होइन भन्न मिल्दैन ।
(संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले दिएको जवाफ)